Jamaica dị njikere maka nnọkọ dị mkpa ya na ndị mmekọ Canada na USA
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica dị njikere maka nnọkọ dị mkpa ya na ndị mmekọ Canada na USA
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Onye Jamaica Tourism Minister and Finance & JHTA Cushioning Impact nke COVID-19 na Ndị Ọrụ Nlegharị Anya
Onye Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ya na ndị isi ndị ọzọ na -ahụ maka njem nlegharị anya, ga -esonye n'usoro nzukọ n'ahịa isi mmalite abụọ nke agwaetiti ahụ, United States na Canada, na -amalite echi, na mbọ ịbawanye ndị bịarutere na ebe yana ịkwalite itinye ego ọzọ. na mpaghara njem.
Agwaetiti Jamaica na-arụ ọrụ iji merie ihe ịma aka nke ịda njem n'ihi ebili mmiri nke atọ nke COVID-19.
CDC kọwakwara mba ahụ n'oge na -adịbeghị anya dị ka Ọkwa 4 maka inwe oke coronavirus.
Emebela nzukọ ndị a iji kwado ndị njem njem ka ha wee gaa n'ihu na -ere ahịa ebe ha na -aga.
Bartlett kwuru na njem a dị oke mkpa, dịka data ndị ozi nwetara na -egosi na ọchịchọ maka njem na Jamaica adaala n'ime ụbọchị 7 gara aga. O kwenyere na "nke a bụ n'ihi ihe ịma aka nke ebili mmiri nke atọ nke COVID-19 na-emetụta agwaetiti ahụ, yana, Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) nke ọkwa ọkwa ọkwa ọkwa 4 ọhụrụ, nyere Jamaica maka inwe. ọkwa dị oke elu nke COVID-19. ”
"Jamaica ka bụ ebe nchekwa na anyị chọrọ ime ka obi sie ndị njem anyị ike maka nke a. Otu ihe dị mkpa bụ okporo ụzọ nnagide njem nlegharị anya anyị, nke nwere obere ọrịa na -erughị 1%. Ngwaahịa anyị ka siri ike ma bụrụkwa nke oke n'uche, n'agbanyeghị ihe ịma aka. Yabụ, anyị ga -aga n'ihu na -akwalite nhazi ahịa iji belata mmebi ọ bụla enwere ike, "Bartlett kwuru.
Emebela usoro nzukọ iji sonye ndị mmekọ njem, mgbasa ozi na ndị ọzọ metụtara na USA na Canada, iji mee ka obi sie ike ma kwalite ntụkwasị obi na ọrụ ntinye ego ha na -aga n'ihu na ịre ahịa ebe ọ na -aga.
Onye ozi ahụ, onye hapụrụ agwaetiti ahụ taa, ya na onye isi njem nlegharị anya, Donovan White; Onye isi oche ndị otu ndị njem nlegharị anya Jamaica, John Lynch, yana onye ọka iwu na -ahụ maka njem nlegharị anya, Delano Seiveright, ga -ezute ndị isi na -etinye ego na njem.
Mgbe ha nọ na United States, otu ndị ọrụ nlegharị anya ga -ezute ndị isi sitere na American Airlines na Southwest Airlines. Ha ga-ezutekwa ndị isi sitere na ọdụ ụgbọ mmiri dị ka Royal Caribbean na Carnival yana ndị isi sitere na Expedia, Inc., ụlọ ọrụ njem ntanetị kacha ukwuu n'ụwa, ụlọ ọrụ njem atọ kachasị ukwuu na US, na njem nke anọ kachasị ukwuu. ụlọ ọrụ n'ụwa.
Nzukọ ndị ọzọ na Canada ga -elekwasị anya n'ịzụ ahịa, ọ ga -emetụtakwa ndị mmekọ niile gụnyere ụgbọ elu, dị ka Air Canada, WestJet, Sunwing, Transat na Swoop. N'otu aka ahụ, ha ga -ezute ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya, ndị na -etinye ego na njem nlegharị anya, azụmaahịa na ndị mgbasa ozi bụ isi na ndị ọ metụtara.
“Anyị chọrọ imesi ndị mmekọ anyị na ndị ọbịa anyị obi ike na anyị na -eme ihe niile anyị nwere ike ime iji hụ na nleta ha n'àgwàetiti ahụ ga -abụrịrị nke nchekwa. Usoro iwu anyị dị ebe a iji hụ na ị ga -enwe ike ịga ebe nlegharị anya anyị wee nwee ahụmịhe Jamaica n'ezie, mana ọ nweghị nsogbu na enweghị nsogbu, ”ka o kwuru.
“Anyị na -agbalite mbọ iji hụ na ndị ọrụ nlegharị anya anyị nwere ọgwụ mgbochi ọfụma ma hụ nnukwu ihe ịga nke ọma site na atụmatụ a. Ya mere, ị nwere ike ijide n'aka na ndị ọbịa nọ na gburugburu nchekwa. N'ezie, a na -eme ụkpụrụ nchekwa na usoro nchekwa anyị nke ọma n'ụwa niile ma bụrụ ihe dị mkpa na anyị nwere ike ịnabata ihe karịrị nde ndị ọbịa kemgbe anyị mepere oke anyị, "Bartlett kwuru.
Minista Bartlett na ndị otu ndị ọzọ ka akwadoro ịlaghachi Jamaica na October 3, 2021.
Airbus: ụgbọ elu 39,000 ọhụrụ, ndị ọkwọ ụgbọ elu 550,000 chọrọ ...
Jamaica amachibidoro njem njem ọhụrụ na ndị Africa…